Etu esi amalite Podcast Na-aga nke Ọma na YouTube? - SoNuker
YouTube nwere ike ime n'uche ndị mmadụ mgbe ha na-achọ vidiyo "ma ọ bụ" vidiyo ma ọ bụ egwu, mana netwọkụ mmekọrịta na-ejikwa nwayọ nwayọ enweta traktị dị ka ebe a na-ekwu okwu. Ọtụtụ ndị na-emepụta YouTube na-eji saịtị ahụ dị ka ọkara iji kesaa ahụmịhe ha na ndị mmadụ-ihe Spotify na Apple Podcasts na-enyerịrị n'ụdị ọdịyo.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ obere nnwale ma bido pọdkastị YouTube, mgbe ahụ i nwere ike ihu asọmpi ụfọdụ n’ihi na ọtụtụ ndị okike YouTube amaliteworị iwebata ọtụtụ nde echiche. Ihe niile gbasara itinye ego na ntanetị na-arịwanye elu nke YouTube na ọchụchọ ya iji nweta ego na iji bulie ndị na-ege gị YouTube.
N'okpuru bụ ụzọ ole na ole ị nwere ike isi malite pọdkastị YouTube ma mepụta mmetụta na oghere ịntanetị:
Tọghata ọdịyo faịlụ n'ime vidiyo
Thezọ kachasị mfe nke ịmepụta ma bido pọdkastị YouTube iji bulie ndị na-ege gị YouTube bụ iji onye ntụgharị nke nwere ike ịtụgharị faịlụ ọdịyo gị na usoro vidiyo. Mana nke ahụ ezughi n'ihi na YouTube dị mkpa ikpo okwu ịkekọrịta vidiyo, faịlụ faịlị na-enweghị vidiyo vidiyo agaghị arụ ọrụ. Ya mere, ị nwere ike tọghata gị ọdịyo faịlụ n'ime vidiyo site na-agbakwunye a static oyiyi nke banyere 2560x2240px na-akụ n'okirikiri. Enwere ngwa sọftụwia na - enyere gị aka itinye ndepụta okwu na nsonaazụ gị na pọdkastị YouTube gị.
Gbaa pọdkastị gị
Dịka e kwuru, YouTube chọrọ faịlụ vidiyo, nke pụtara na pọdkastị gị ga - enwerịrị ihe vidio maka ya ịrịgo n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị na-edekọ ụda Podcast, ịnwere ike ịnweta igwefoto ma jiri aka gị mee ihe nkiri ka ị na-ekwu okwu. Somefọdụ ndị okike na-agbanwegharị faịlụ ọdịyo na vidiyo tupu ha bulite na YouTube naanị site na ịgbakwunye onyonyo. Ma igosi onwe gị na vidiyo ahụ ga-eme ka ọ bụrụ nke onwe. Nwere ike ijide akụrụngwa dị mkpa ma họrọ oghere na-enweghị mkpọtụ iji gbaa podcast YouTube gị. Ọ bụrụ na ị maraworị ọkachamara ọkachamara na-eme vidiyo, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ha.
Jiri ajụjụ ọnụ gị
O nwedịrị oge ị ga-agba ajụjụ ọnụ n’ebe dị iche iche. Ajụjụ ọnụ ndị a nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya mgbe ị na-eme Podcast YouTube. May nwere ike iji sọftụwia iji jụọ ajụjụ ọnụ nke ga - enyere gị aka ijikọ. Ngwa ngwanrọ dị otú ahụ na-enye ike nke ihuenyo-ijide ajụjụ ọnụ gị; ha na-enye gị ohere ịdekọ vidiyo gị na ọdịyo n'otu oge maka ọdịnihu gị. Mgbe Ajụjụ ọnụ gị kwụsịrị, ị ga-enweta vidiyo nkewa ihuenyo nke ga - enyere gị aka bulite pọdkastị gị na YouTube. Otú ọ dị, nanị mwepu nke usoro a bụ na video àgwà nendsche na-degrade, si otú na-eme filming a mma nhọrọ. Ka o sina dị, ị nwere ike ịga maka ụzọ a dị mfe ma dịkwa mfe nke ịmepụta na bulite pọdkastị YouTube gị n’emeghị nnukwu oge na ego.
Kedu otu ịmalite pọdkastị YouTube nwere ike inyere gị aka?
Podcasting apụtawo dị ka nnukwu ụzọ iji gosipụta nka gị na otu niche ma mee ka ndị na-ege gị YouTube. Site na ịmalite pọdkastị YouTube, ị nwere ike ịdọta ndị mmadụ nwere mmasị dị iche iche ma nwetakwuo ndị na-ege ntị. Ga - enwerịrị ike igosi ihe ngosi gị site na ịpị aka na ihe ndozi nke injin nyocha nke abụọ kachasị elu n'ụwa.
Nnukwu uru ọzọ nke ibido pọdkastị YouTube bụ na ọkwa mmekọrịta na itinye aka. Ngalaba okwu a ga - enyere gị aka itinye aka na ndị na - ege gị ntị, zaghachi ajụjụ ha ma meere onwe gị ike iji aka gị. Ọzọkwa, ị ga-enwe ohere ịkwado elu na engines ọchụchọ n'ihi na nke ahụ bụ ihe vidiyo YouTube na-eme-algorithms YouTube na-eme ka ha pụta ìhè na crawlers engine. Ozugbo ndị na-ege gị ntị nwere ike ịchọpụta pọdkastị YouTube gị, ọ gaghị ele anya n'azụ maka ngosi gị.
Etu esi amalite Podcast Na-aga nke Ọma na YouTube? nke ndi dere SoNuker, 17 April 2021
Etu esi emepụta ogu ahia nke YouTube?
YouTube nwere ihe karịrị 126mn ndị ọrụ pụrụ iche kwa ọnwa, si otú a bụrụ usoro ikpo okwu vidiyo kacha ewu ewu na United States. Netwọk mmekọrịta na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto, ọkachasị n'etiti 15 na 25….
Etu ị ga - esi nweta Hashtags kacha mma na YouTube?
Ọ bụ na 2016 mgbe vidiyo na -ekere òkè na-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu YouTube webatara hashtags. Mana n'ime afọ ole na ole, YouTube hashtags agbanweela nke ukwuu iji mee ka ahụmịhe dum nke vidiyo na-achọ ndị na-ekiri ka mma. Ghara ichefu, ikpo okwu…